Xog: Mucaaradka oo 10 qodob hordhigay RW Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha Modwga Musharixiinta, ayaa Sii-haya xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, hor dhigay inuu hirgaliyo 10 qodob oo lagama maarmaan ah, si ay ula shaqeeyaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya toddobaadyadii la soo dhaafay waxay muujisay dhammaan calaamadaha aan la aqbali kirin ee sharciga ka soo horjeeda, kadib markii dib-u-dhicii doorashada lagu daray boobka kuraasta, ka been sheegidda odayasha dhaqanka, la’aanta xubnahii Ururrada bulshada, ergo askar ah iyo jidgooyooyinka musharixiinta.
Doorashada kuraasta Golaha shacabka ee Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Gobollada Waqooyi ayaa la guda galay dhawaan, hayeeshee, waxaa hareeyay cabashooyin xooggan, kadib markii Madaxda Maamullada iyo Guddiyada doorashada ay boob qaawan kula kaceen inta badan kuraasta ilaa hadda soo baxay.
Tallaabadaas, waxa ay dhalisay in Golaha Modwga Musharixiinta, ay qaadacaan natiijada doorashada boobka ah, isla-markaana ay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Xil-gaarsiinta ku wargaliyaan inuu aysan marnaba aqbali doonin natiijada.
Xog ay heshay Keydmedia Online, ayaa caddeyneysa in Midowga Musharixiintu, RW Rooble, hor dhigeen fulinta 10 qodob, si ay u taageeraan hannaanka doorasho ee uu hormuudka u yahay.
In guud ahaan xilka laga raacdeeyo, Guddoomiyayaasha Guddiyada Doorashada, sida; Heer Federaal, [Maxamed Ciro] Heer Dowlad-goboleed, [Galmudug, Koofurgalbeed Soomaliland] iyo Xallinta Khilaafaadka.
In dib loogu laabto shaandheynta Guddiyada, laga saaro shaqsiyaadka aan dhexdhexaadka aheyn ee boobka hirgaliyay, sida Xoghayayaasha iyo xubnaha kale ee calaameysan.
In Madaxweynaha Puntland Siciid Deni, uu faraha kala baxo maamulka doorashada lagana saaro Golaha Wadatashiga qaran, maadaama uu yahay musharrax.
In dib loogu laabto dhamaan kuraasta doorashadooda la boobay.
In eedeysanayaasha maxakamaddu ku furan tahay aysan tartami karin iyo in saraakiisha ciidanka kala duwan ee QS, ay maraan habraaca doorashada.
In Ra’iisul Wasaarahu si toos ah u faragaliyo, wixii khalad ah ee yimaada.
In meesha laga saaro awoodda Madaxda Maamullada ee doorashada, loona madaxbanneeyo guddiyada, odayaasha [Saxiixayaasha] iyo xubnaha bulshada rayidka.
In la helo ciidan lagu kalsoon yahay oo Ra’iisul Wasaaruhu wakiil yahay oo suga amniga doorashada.
In la helo, Korjooto caalami ah, oo ku sugan goobaha ay ka dhaceyso doorashada.
In dhamaan qodobadaan lagu saxiixo kulan loo dhan yahay.
Mucaaradku, waxa ay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta ku wargaliyeen in haddii xaalku sidaan sii ahaado ay qaadi doonaan tallaabo ay ku badbaadnayaan dalka.
Sida xogta KON soo gaartay muujineyso, Midowga Musharixiinta, ayaan wax kalsooni ah oo in qodobadaas la hirgaliyo ah ku qabin Ra’iisul Wasaaraha, waxayna isku raacsan yihiin in sida ugu dhaqsiyaha badan dhidibada loogu taago Gole Qaran oo ku meel gaar ah, kaas oo dalka ka saara xilliga kala guurka.